FARRIIN: Halkan Kaga Boggo Farriintii Uu Jordan Pickford U Diray Virgil Van Dijk Oo Uu Dhaawac Halis Ay U Geystay - Gool24.Net
FARRIIN: Halkan Kaga Boggo Farriintii Uu Jordan Pickford U Diray Virgil Van Dijk Oo Uu Dhaawac Halis Ay U Geystay
Goolhayaha kooxda Everton ee Jordan Pickford ayaa farriin saaxiibkiisa xulka qaranka England ahna kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ugu dhiibay daafaca dhexe ee Virgil Van Dijk oo uu dhaawac halis ah gaadhsiiyay kulankii maanta ee Derby Merseyside.
Van Dijk ayaa kubadda geeska laga soo tuurayay ee kooxdiisu lahayd xerada ganaaxa dhexdeeda ku helay isla markaana taabtay balse marka uu kaddaba tagay ayuu cadaadis kala kulmay Pickford oo qalad weyn ku galay.
Qaladkaas oo Everton rigoore iyo casaan Pickford la siiyo ku noqon karayay ayaa bedelkiisa Offside lagu dhigay Reds iyadoo aan wax ciqaab ah la marinin goolhayaha xulka qaranka England.
Kulanka kaddib Jordan Henderson oo u warramay BT Sport ayaa sheegay inuu loolan aan fiicnayn ahaa isla markaana xusay inuu Pickford isaga raaligelin ugu dhiibay Van Dijk.
“Qofkasta wuu i weydiinayaa sidaas darteed waa inuusan ahayn loolan wanaagsan (Qaladkii Pickford)” ayuu yidhi Hendo.
“Jordan wuu yimid raaligelin ayuuna bixiyay kulanka kaddib (Aniga ayuuna ii sheegay) inaan u sheego Virgil”
Pickford ayaa kulanka dhexdiisa wacdarro kusoo dhigay kaddib qaladka uu ku galay Van Dijk isaga oo laba badbaadino oo heercaalami ah ka sameeyay Trent Alex Arnold oo laad xor ah ku laagay iyo Joel Matip oo madax halis ah galay.